Soomaliya – Page 3 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO VIDEO:Dalalka UK,Maraykanka,faransiiska Iyo Norway oo Isku Khilaafay Kiiska Bada Kenya Iyo Soomaaliya.
Warbixin uu Qoray Wargeyska theconversation Wuxuu Sheegay In Muran ka saabsan dhul badeedka Badweynta Hindiya ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ay dhalisay in waddamada reer galbeedka ugu waaweyn ay labada dhinac isku hayaan, taas […]
DEG DEG: Mooshin deg deg ah oo laga qorayo Dhoobo-Daareed & Deni oo ku dhaartay.
November 5, 2019 Ali Osman 0
DAAWO:Wararkii ugu dambeeyey Puntland, Roobab ka da’ay Sool & Sanaag, Xiisadaha Galmudug & Caalamka
November 4, 2019 Ali Osman 0
Waxaan halkan idiinku soo gudbinaynaa daawayaal wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo Caalamka oo ay kamid yihiin xiisadaha ka taagan Galmudug, roobab mahiigaan ah oo ka da’ay deegaano kamid ah Puntland, kaalmada Turkiga, xasuuqa Kenya […]
Turkiga oo markale kudhawaaqay war kusaabsan wadahadalada Somalia iyo Somaliland “Diyaar baanu unahay…”.
November 4, 2019 marqaan 0
Dowladda Turkiga ayaa shaacisay in xilligaan Soomaaliya u baahan tahay taageero ballaaran si ay u hesho xaalad deganaansho ah oo Shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba ay ku gaaraan guulweyn. Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu […]
DFS oo Ciidamo dheeraad ah ku daabulaysa Caasimadda Galmudug iyo Cabsi soo wajahay shacabka Magaalada.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in garoonka Magaladaasi ay ka dagtay diyaarad siday Ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya, gaar ahaan kuwa ay tababartay dowladda Turkiga loona yaqaan Haramcad. Ciidamadaan maanta dowladda geysay […]
Degdeg:- Daacishta Somalia oo shaacisay in ay uhogaansami doonto Awaamiirta Amiirka Cusub ee lagaga dhawaaqay Syria.
Ururka Daacish faraciisa Soomaaliya ayaa war ka soo saaray geerida Hoggaamiyihii Ururkaas Abuu Bakar Al Baqdaadi oo todobaadkii hore lagu dilay Dalka Syria. Sawir la geliyay barta Telegramka ee Ururka Daacish ayaa lagu sheegay in […]
DAAWO:- Ciidamada Kenya oo ordhiyay dhibaatada ay kuhayaan shacabka Somaliyeed ee kunool NFD iyo Xuduuda.
Wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay warbixin dheer oo uu uga hadlayo howlgallada ka dhanka ah AL-shabaab ee ay Ciidamada Kenya ka wadaan Koofurta Soomaaliya iyo Gobolka Soomaalida ee ay […]
DEG DEG+DAAWO: Dagaalka Boosaaso, Hanjabaada Kheyre & Khasaaraha Roobabka.
DAAWO XOG Cusub:- Mareekanka oo lagala wareegayo ciidankii ay sameysatay ee Somalida ahaa…
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wadda qorshe Ciidamada DANAB ee uu tababaray Mareykanka loogu darayo Ciidamada xoogga dalka. Warar kala duwan oo ay Mustaqbal Radio ka heshay ilo ka mid ah hay’adaha amaanka iyo […]
DAAWO:- Axmed Karaash oo laba qodob kula dardaarmay Dhalinyarada “Albaab garaaca oo Shabaab la dagaalama” + Gurmadkii Baladwayne.
November 3, 2019 marqaan 0
Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ka qayb galay sagootinta wejiga 1-aad ee Gurmadka Puntland ee walaalaha Baladweyne. Sagootinta Gurmadka reer Putland ee walaalaha Baladweyne ayaa waxaa Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland ku […]
DAAWO Degdeg:- Sh.Shaakir oo qiray in looga adkaaday Gobolka Galgaduud Balase sabab yaab leh ayuu sheegay…
November 3, 2019 marqaan 1
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah Mas’uuliyiinta Ururka Ahlusunna ayaa sheegay in Ahlusunna aysan dooneynin dagaal ay la gasho Ciidanka dowladda Soomaaliya ee la wareegay degmooyinkii ay maamuli jireen. Waxaa uu sheegay […]
DAAWO:- Duqa Caasimadda Galmudug oo kudhawaaqay in Dhuusamareeb ay la wareegtay DFS sheegayna in Ahlusunna ay carartay…
Guddoomiyaha degmada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud ugu Magacaabey Ahlusunna Macalin Nuur Cilimi Cabdulle ayaa sheegay in wax dhibaato ah aysan xilligaan ka jirin degmada,isla markaana amniga guud ee Magaalada uu yahay mid wanaagsan. Waxaa uu […]
DAAWO:- Algeria:- 5Musharax oo kasoo haray siyaasiyiintii is daba eraynanaysay ee tartanka adag udhaxeeyay.
Guddiga doorashadda dalka Algeria ayaa ku dhawaaqay bisga soo socota ay dhacayso wareega ugu dambeeya doorashada madaxtinimada dalkaasi oo markaan ay isku soo hareen 5 musharax oo kaliya. Madaxa guddiga doorashada Max’ed Shoorfi waxaa uu […]
SAWIRO:- Bankiga Aduunka oo Xafiis kafurtay Muqdisho “Ujeedkiisu ma waxa uu yahay inuu la xisaabto Dowladda Somalia?”.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka, Xafiz Ghanim oo dalka soo gaaray maanta, xarigana ka jaray xafiiska cusub ee Bangiga adduunka oo Muqdisho […]
Puntland:- Deegaano Horleh oo laga baqayo inay ku dhuftaan Dufaano ayaa waxaa ka curtay Roobab Dabaylo wata.
Iyadoo ay jirtay cabsi laga qabo in duufaanno ay ku dhuftaan Gobolka Nugaalka iyo qaybo ka tirsan Soomaaliland, ayaa waxa ay roobab ka bilowdeen qaybo katirsan Gobolka Nugaal, Bari. Meelaha ay sida xun roobabku uga […]
Taliyaha Qaybta Boliska Gobolka Bari G/Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa ka hadlay Roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ka da’ay deegaano katirsan Gobolka Bari. Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa sheegay in roobabka ay ka da’een meelo […]
Warbixin+XOG:- Maxaadan Ogayn oo xiilligaan kasocda MNagaalooyinkii Ahlusunna katalin jirtay ee laga qabsaday shalay iyo Xalay?.
Waxaa Xaalad Daganaashaa laga soo tabinayaa degmooyinka Dhuusamareeb,Guriceel iyo Matabaan oo saacadihii la soo dhaafay ay ka taagneed Xiisad u dhexaysa Ciidamo taabacsan Madaxa Xukumada Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Ciidanka qaybta 21 […]